३२ प्रतिशत युवाको रोजाइ कतार, किन बढ्यो आकर्षण ? - Deshko News Deshko News ३२ प्रतिशत युवाको रोजाइ कतार, किन बढ्यो आकर्षण ? - Deshko News
३२ प्रतिशत युवाको रोजाइ कतार, किन बढ्यो आकर्षण ?
कतार जाने युवाको संख्या दुई लाख पाँच हजार सात सय ५६ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कतार जानेको संख्या करिब साढे एक लाख हाराहारी थियो । सरकारले २०७२ असारदेखि लागू गरेको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णयसँगै ओरालो लागेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसमेत लयमा फर्केको हो ।
आव ०७२/७३ मा चार लाख १८ हजार नेपाली कामका लागि बिदेसिएका थिए भने आव ०७१/७२ मा पाँच लाख १२ हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिएका थिए ।
त्यसमा कतार पहिलो नम्बरमा छ । कतारमा एक लाख १३ हजार चार सय ४८ जना र मलेसिया ९५ हजारभन्दा बढी छन् । मलेसिया नयाँ काममा लागि जानेको संख्यामा पनि सुधार आएको छ ।
तर, कतार जाने संख्या भने निरन्तर बढ्दो छ । पछिल्लो दूई महिना कतारमा गल्फ राष्ट्रले लगाएको नाकाबन्दीको ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको थियो । यो संख्या पनि विस्तार बढ्दै गएको कार्यालयको भनाइ छ ।
गत आवमा मात्रै विदेशबाट नेपाल आई पुनः विदेश जानेको संख्या पनि दुई लाख ५६ हजार सात सय ७० छ । जसमा कतार जानेको संख्या नै बढी छ । कतार जाने ८४ हजार, साउदी अरब ६८ हजार र मलेसिया २४ हजार छन् ।
सरकारले फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेपछि मलेसियालगायत दुबई, साउदी अरबबाट म्यानपावर व्यवसायीले राम्रा कम्पनीको डिमान्ड नल्याउँदा पनि युवा कतार जान बाध्य भएका छन् ।
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई कामदार पठाएबापत सेवा शुल्क पनि नदिने हुँदा व्यवसायीले कामदारलाई फकाई फुलाई कतार पठाउने गरेका छन् ।